Ị nọ ebe a: Home / Archives maka Ngwọta Na-eto Eto / Otu esi eto
Na aquaponics ụwa bụ nnukwu ụwa n'oge a, ya mere nnukwu na n'ezie saịtị ahụ raara onwe ya nye nanị aquaponics. Ebee ka m ga-eguzo n'ebe a? Ihe mgbaru ọsọ m ebe a bụ igosi gị ụzọ. Naanị! Ọ dịghị ọzọ na ọ dịghị obere! Nke a bụ ihe mere ị ga-ahụ ebe a na mpaghara ahụ, ụfọdụ ihe ngwọta aquaponics na-anọchite anya "ụdị" ejiji nke aquaponics.